Kies Air waxay kuu ogolaaneysaa inaad iskudhafanto Samsung Galaxy-gaaga kumbuyuutarkaaga bilaa xarig | Androidsis
Waxay u dhowdahay xaqiiqo lamaqal gal ah in hadda telefoonka gacanta ugu fiican ee android waa Samsung Galaxy S. Kuwa ay waxqabadka Waxay ku siiyeen terminalkan tayo ku dhow xudduudda dhammaystirka, illaa maanta dabcan, oo had iyo jeer tixgelinaya in midabbada ay ku saabsan yihiin dhadhanka.
Mid ka mid ah cilladaha yar yar ee uu taleefankan casriga ah lahaa ayaa ahaa wadada kaliya ee lagu waafajiyo Samsung Galaxy S waxay ahayd iyada oo loo marayo fiilada nacaladda ee ku xiran kumbuyuutarka. Dib u dhac ku yimaadda Android, intaa ka sii fiirsaneysa taas iPhone, midka ay sida tooska ah u xafiiltamaan, ayaa leh xulashadan. Waayahay, waxaa jira codsiyo sida Isku duubnaan la waayey taas ogolaan iskudir kumbuyuutarradeena Android kombiyuutarka adoo adeegsanaya Wifi laakiin ma jiraan wax rasmi ah oo loo yaqaan 'Galaxy S.'
Waa hagaag, ragga ka tirsan Samsung shaqadoodu hoos ayey u dhacday oo hadda ayey bilaabeen Kies Air, waa codsi xiiso badan oo kuu ogolaanaya inaad ku xirto barnaamijka aad jeceshahay ee Galaxy S kombiyuutarkaaga adoo adeegsanaya xiriirka Wi-Fi. Nabadeey fiilooyinkaas faraxsan.
Samsung Kies Air waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo dejiso ama soo degsato liiskaaga xiriirada, sawirada, muusikada, fiidiyowyada, liiska wicitaanada la sameeyay, fariimaha Google ...Waxaan sameynaa waxa lagama maarmaanka u ah si looga fogaado in la isticmaalo fiilada USB. Xitaa kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto SMS kombiyuutarkaaga, in kastoo aan u arko ikhtiyaar xoogaa chorra ah halkaas ayey ku taal. Barnaamijkaan waa Waxaa laga heli karaa Samsung Apps inkasta oo aadan soo dejisan karin wali haddii aad ku nooshahay Spain. Aynu rajeyno inaysan waqti dheer qaadan maxaa yeelay farxad dhab ah ayey u tahay dadka isticmaala terminalkan xoogga badan.
Xigasho | Bulshada Android
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Kies Air kuu ogolaanayaa inaad si aad u waafajin aad Samsung Galaxy la your computer wireless
Taas oo ah inaan laga soo dejin karin Isbaanishka, waan ka tagi doonaa… Waxaan u soo dejiyey inaan tijaabiyo shan iyo toban maalmood ka hor, anigoo u maleynaya inay u qalanto sida OTA-ga oo aan ka saaray daqiiqada markaan arkay sida ay u shaqeyso. Codsigana wali waa laga heli karaa Samsung Apps.
cimrigoo dhan wikey .app
Waa hubaal !!! Waxaan sidoo kale haystay illaa 15-20 maalmood. Wareejinta faylasha way fiicantahay, laakiin uma adeegayso inay cusbooneysiiso mobilka ...
Waxaan la wadaagayaa faallooyinka Ivan iyo AdriP, wali waan sii rakibay laakiin runtii ma aqaano sababta, waqtigan xaadirka ah waa codsi caajis badan xitaa wareejinta faylasha.
Haddii aad cusbooneysiiso 2.2.1 waxaad heli doontaa taageerada OTA.
Iyo waxa ku dhacaya kuweenna haysta Mac OS X, in maalin kasta oo dhaaftaa aan ka badan nahay. Ma dhici doonto iyaga iyaga si ay u barbardhigaan Kies u dhigma Mac?
Ku jawaab ttogores
Taleefankani wuxuu noqon karaa caano laakiin hadaanan ku xidhi karin mac wuxuu lumayaa nimcadiisii ​​oo dhan
Sida ttgores tngo mac iyo galaxy S waana wax la yaab leh in Samsung aysan Kies u soo bandhigin mac os x. Waxaan rajeynayaa inay dhaqso u soo toosaan
Ku jawaab bilax
Waan kula socdaa, sida ay mobiladu u fiican tahay, waa wax laga xumaado in Samsung aysan samayn nooc KIES ah oo loogu talagalay Mac OS X. Haddii qof ka socda Samsung uu arko kulamadaas, laga yaabee, ugu dhakhsaha badan, waxaan u yeelan doonnaa nooc kuwaa Yaan jecel nahay waxyaabaha si wanaagsan loo qabtay, miyaadan u malayn?
Jawaab Mr. Bean
Hagaag, anigoo raadinaya kies-ka cusub ee 2.0 ee shabakada samsung, waxaan arkay inay leeyihiin 'kies mini' Mac ... Ciddii haysata OS X inay isku daydo.
Kies mini waxaa loogu talagalay Samsung wave.
WAA SALAAN, LAAKIIN MAXAY YAHAY TALLAABOOYINKA LAGU SAMEEYAY KIES MINI OO AY KU SAMEEYAAN MAC '' ?????? ILAAHAY HA NOO caawiyo !!
Ku jawaab shoffar
Waan kula jiraa Waxaan haystaa Galaxy ilaa 5 bilood welina kama shaqeynin mac-da si dabiici ah, waxaan sugayay xoogaa sababtoo ah imaatinka Kies mini (codsi aad u karti badan) waxay umuuqatay in Samsung ay dhaqaaqeyso, laakiin iyagu wali sidii ayey ahaanayaan. Waxay u muuqataa in Samsung ay u qaataan si fudud in dhammaan dadka isticmaala mac-da ay isku tuurayaan dhinaca Iphone-ka ...
Ku jawaab Luisete
orod maaratoon dijo
Maxaa dhab ahaan loogu talagalay kies?
marka laga reebo sida c ... ma u cusbooneysiiyaa 2.2 ama 2.2.1?
Sifiican ugama dhex helayo ciyaarta
Waxaan rabaa inaan dhigo viber (ma garanayo waxa ay tahay laakiin waxay igula taliyeen inaan sameeyo oo ma heli karo)
Ku jawaab marathonianoveloz
Samsung galaxy mini sidoo kale wuu awoodi doonaa?
Ku jawaab Rosa
WAAN U BAAHANAHAY WINDOWS 8